၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်စပွန်ဆာပေးမှု - ပိုလန်မြန်နှုန်းပြိုင်ခြင်း | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ စနေနေ့တွင်ပိုလန်မြန်နှုန်းမြင့်တောင်တက်သမားများ၏နာမည်ကြီးများသည်သူတို့၏အားကစားရုံဖြစ်သော Arena Gliwice တွင်ဆက်လက်ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ရက်ကြာဒေသဆိုင်ရာမြန်နှုန်းနှင့်ခဲပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရောဂါကူးစက်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ပွဲစဉ်အတွင်းစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်စီစဉ်သူများသည်ပွဲစဉ်ကာလအတွင်းမျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ဆင်သည်။ အားကစားသမားများကသူတို့၏အမြန်ပြေးချိန်တွင်မျက်နှာဖုံးမပါဘဲယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြသည်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကိုတောင်တက်နယ်ပယ်တွင်ခွင့်မပြုသော်လည်းပိုလန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိလျင်မြန်သောတောင်တက်အားကစားသမားများအားထိုပွဲ၏ပွဲစဉ်တွင်အားပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Youtube Page ။
ဤသည်မှာဒေသတွင်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ပြိုင်ဘက်များအကြား Aleksandra Mirosławနှင့် Marcin Dzieńskiတို့ထံမှချန်ပီယံဆုကိုခိုးယူရန်လိုအပ်သည့်အရာများရှိမရှိသိရန်မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိခဲ့သည်။ Olympian Aleksandra Mirosławသည်တိုကျိုအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်သွားနေစဉ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုအခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်သူမပြိုင်ဆိုင်မှုအားနည်းခြင်းရှိမရှိကိုလည်းသိလိုခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပါ။ Mirosławနှင့်အမေဖြစ်သူ Marcin Dzieńskiတို့သည်၎င်းတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံစံဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပြေးပွဲတွင်Mirosławသည်အကောင်းဆုံးဆုဖြင့် ၇.၁၃ စက္ကန့်ဖြင့်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရရှိခဲ့ပြီး Marcin သည်စင်မြင့်ထိပ်တွင် ၅.၈၈ ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးစင်မြင့် 1. Aleksandra Mirosław, 2. Aleksandra Kałucka, 3. Patrycja Chudziak
အမျိုးသားစင်မြင့်: ၁။ မာကင်ဆင်ဒီဇန်စကီ၊ ၂ ဟူဘတ်ပရူတိုလ်လာ၊ ၃ ။ MikołajWróblewsk
လူငယ်အမျိုးသမီးစင်မြင့် ၁။ Aleksandra Kałucka၊ ၂ Agata Lesiewicz, 1. Natalia Kałucka
လူငယ်အမျိုးသားစင်မြင့်: ၁။ Miłosz Bujak, ၂။ Konrad Gruszka, 1. Bartłomiej Podlewski